Zimbabwe issues fresh banknotes to ease cash shortages - Capital Business
New Zimbabwe two-dollar notes have been issued to help ease a chronic cash shortage in the country/AFP
HARARE, Zimbabwe, Nov 13 – Cash-strapped Zimbabweans began using new banknotes and coins Tuesday, as the nation’s central bank seeks to ease chronic shortages.
“Bond” notes – a legal tender pegged to the US dollar – were introduced in 2016 to alleviate chronic cash shortages and ease a transition back to Zimbabwean dollars.
Withdrawals remain capped at a maximum of 300 new Zimbabwean dollars ($18) per week per customer – which buys less than three kilogrammes of beef.
In Zimbabwe’s capital Harare, bank customers remained sceptical.
Zimbabwe’s reserve bank said that only 31 million new Zimbabwean dollars (less than $2 million) had been disbursed so far, of a planned total of one billion that is to be drip-fed into the system over the next six months.